Vidiyo na-amị mkpụrụ na Cantaloupe TV | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 27, 2007 Tọzdee, Septemba 26, 2013 Douglas Karr
Taa ka emechara m Cantaloupe TV site na otu Jo DiGregory, otu n'ime ndị mmekọ ntọala. Akụkọ banyere Cantaloupe bụ akụkọ na-akpali akpali ma ọ bara uru ile anya. Ndị otu na Cantaloupe nwere echiche nke ha n'ihe ha na-anwa ime, mana m ga-atụnyere ya na vidiyo na-emegharị ihe ịde blọgụ.
Cantaloupe abụghị vidiyo nke ewuru na interface njirimara mara mma ma ọ bụ ngwakọta vidiyo dị egwu. Kama nke ahụ, ụdị Cantaloupe bụ iji hụ na ọdịnaya na mkparịta ụka bụ isi - iwulite ntụkwasị obi na 'akụkọ' iji jikọta vidiyo ọnụ ma kpọghachite ndị mmadụ. Cantaloupe nwere ụdị 'videosphere' nke ha.
Enwere ike wuo saịtị nke chịkọtara ọdịnaya vidiyo ('ọwa'), otu a pụrụ iche ma bụrụ ndị na-ege ntị site na saịtị ọ bụla. Cantaloupe na-akwalite ihe usoro nke vidiyo, ọ bụghị naanị otu vidiyo. Ọzọkwa, ebumnuche bụ ime ka ndị na-ege ntị na mkparịta ụka ahụ, ọ bụghị naanị igosipụta ngwa ọrụ ọgbara ọhụrụ na-agbagha mmụọ karịa itinye ya.
Lelee anya na Ghọta TV Cantaloupe Peeji na saịtị ha. Ka ha siri kwuo ya:
Akụkọ banyere gị, azụmahịa gị na ụlọ ọrụ gị.
Cantaloupe na-eji ike nke vidiyo weghara-ekere òkè serendipitous, “dị ka ọ na-eme” akụkọ banyere gị mgbe iji ike nke ịntanetị gafere ha them
Enwere ike itinye ọdịnaya ma tụọ ndị na-ege ntị. Enwere ike nyochaa ma gụọ vidiyo nke ọ bụla ma tụọ iji hụ ma ndị mmadụ na-elele ihe niile ma ọ bụ na-agba ụta n'oge. Ọ bụ n'ezie jụụ stof. Ndị otu a na-ewetakwa ụfọdụ akụrụngwa Search Engine iji hụ na iji teknụzụ ga-enwetakwa elebara anya nke ọma site na igwe ọchụchọ. Ọ bụrụ na-amasị gị, ị nwere ike ịlele ụfọdụ n'ime ha Magazin Video dị ka nke ọma.
Teknụzụ dị oke ọnụ. Ọ na-eju m anya oge niile na otu ị ga - esi chọta ọrụ ndị a n'ịntanetị, Cantaloupe nwere ohere ịgbanwe azụmaahịa ahụ wee chụọ ụgwọ ndị a n'ime ala - na - enweghị ịchụ ihe ọ bụla n'etiti. Dị ka Jon tinye ya, ọ bụghị banyere “Olee otú jụụ ndị spinning Flash bọtịnụ dị na saịtị ahụ, ọ bụ ihe banyere ozi ahụ!”.
Hụ na ị ga-enyocha ya Usoro n'ezie na Cantaloupe mere onwe ya, ọ na-akpali akpali n'ezie.
Aga m ekpughekwu Cantaloupe TV n'oge na-adịghị, ebe ọ bụ na a ga-enwe ihe na-abịa Indianapolis Technology Conference na m na-ekwu okwu nke ga-eji teknụzụ (ihe na-abịa na nke a… mmalite December). Cantaloupe TV dị ka ọtụtụ azụmaahịa m hụrụ na-epulite ebe a na Indianapolis.
Ihe jikọrọ ya na-egosi na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka teknụzụ Indianapolis bụ maka idozi nsogbu ahụ ma ghara ichegbu onwe gị maka ihe efu ahụ. Anyị ga-ahapụ nke ahụ nye ụmụ nwanne nne anyị na San Jose. Ngalaba teknụzụ na-etolite n'ezie na obodo na-eto eto ebe a ma anyị na-amalite ịhazi onwe anyị. Ọ dị mma ịbụ akụkụ ya!
Banyere aha ahụ, Cantaloupe, ọ bụ otu n'ime aha ndị ahụ dị mma mere na mgbe Jon na - egwu ala na cantaloupe.
Tags: kantalupcantaloupe.tvjon digregory